GIS 9 Manifold… dhaqso - Geofumadas
GIS kala cayncayn ah
Manifold GIS 9 ... dhakhso ah
Maarso, 2009 GIS kala cayncayn ah
Maanta, Maarso 16, Manifold wuxuu sameeyay war-saxaafadeed, kaas oo uu kaga hadlayo mudnaanta nooca 9aad ee badeecadiisa ay qaadaneyso. Sida ay sheegeen, Manifold GIS 9 waxaa la sii deyn doonaa qeybta hore ee sanadka 2009, iyo Chris C.
Waa imisa kharashka Manifold 9
Sida ku xusan sii deynta, casriyaynta Manifold 8 ilaa Manifold 9 waxay socon doontaa inta udhaxeysa $ 50 iyo $ 100. Waxay xusayaan wax lagu daray wixii cusbooneysiin ah ee noocyadii hore ka soo baxay, taas oo ah kiiskeyga, waxaan u maleynayaa inay ku bixi doonto $ 150.
Waa cad yahay, in haddii aan haysanno laba hawlgal oo kaliya, marka la hagaajinayo version 9 waxaan leenahay mar kale hawlaha 5 ... hurray! ee loogu talagalay software qiimo jaban.
Waa maxay Manifold 9 cusub
Waxbadan kama aysan sheegin weli, marka laga reebo inay diiradda saarayaan la shaqeynta processor-yada Multicore. Nooca 8 wuxuu horeyba u leeyahay shaqeynta ku shaqeynta kaararka Nvidia Cuda, taas oo geeddi-socodka wax-u-qabadka kheyraadka uu noqdo mid fudud, taasoo ka dhigeysa mashiinku inuusan u ekaan oo kaliya kombiyuutar super laakiin sidoo kale software aad u tayo badan. Dhammaantood loogu talagalay ka-faa'iideysiga geeddi-socodka kala duwan ee qalabka laakiin lagu dabaqay horumarinta barnaamijka.
Markaan ka hadlayo samaynta geeddi-socodka waxtarka leh, waxaan ula jeedaa waxa ay sameeyeen ee bandhigga kaas oo ah qaab muuqaal ah oo dijitaal ah oo si tartiib ah u dhalin lahaa Daqiiqado 6 iyo marka la dalbado shaandhayn badan oo badan ayaa la sameeyay kaliya wareegyada 11.
Tani waa in la yareeyo waqtiga shaqada, taas oo Geotec ku guulaysatay sannadkii hore.
Waxay umuuqataa in Manifold uu diirada saari doono tan, ka faa'iideysan doono xawaaraha howsha maxaa yeelay bayaankooda waxay waxbadan u hureen xalinta su'aalaha guud ee ku saabsan kaararka fiidiyowga ee nooca 9 uu taageeri doono iyo qiimaha hoose ee kaararka Nvidia. Keliya ma aha oo keliya geeddi-socod laakiin waa in si wanaagsan loo maareeyo qaabka .map-ka ee Manifold uu ku maareeyo ficil ahaan wax kasta oo laga yaabo inuu sii ballaariyo suurtagalnimada daabacaadda adeegyada IMS.
Hadda, waa inaan sugnaa.
Post Previous" Hore Bentley Power waa muwaadin u dhashay Spain
Post Next From Excel ilaa AutoCAD, marna ma fududaNext »
Waa maxay galaxy?
Waa maxay meerahu?
Waa maxay dayax gacmeed?